Accueil > Gazetin'ny nosy > Fikasana hamono an-dRajoelina : Tandremo tsy hivadika ny rasa !
Fikasana hamono an-dRajoelina : Tandremo tsy hivadika ny rasa !
Mbola ambentin-dresaka sy matoam-baovao ho an’ny mpanara-maso ny raharaham-pirenena hatrany ity fikasana hamono ny filoha Rajoelina ity. Misy hatrany koa moa ny vaovao avy amin’ny tompon’andraikitra misahana ny famotorana, ka ahenoana, na ny olona nalaina ambavany na ny mpitandro ny filaminana voatonontonona, sy ny sisa.
Maro ny manara-maso akaiky an’ity raharaha ity. Ireo misora-tena ho mpanohitra dia mailo mihitsy satria manahy izy ireo sao tsy misy idirany akory io raharaha io nefa mety hisy halaim-panahy hampifandray an’io fikasan-dratsy io amin’ny hetsik’izy ireo, mba hanamarinana ny fepetra horaisina na hisamborana azy ireo. Ny mpiara-dia amin-dRajoelina koa dia maro no mitaintaina satria toa misy volon-gita mifandray tendro mampiahiahy any ambadika any amin’izy io. Tsy latsak’izany ny ao anivon’ny fianakaviamben’ny foloalindahy ao, na miaramila na zandary.
Ny zavatra mahalasa fisainana aloha dia ny efa nisian’ny tompon’andraikitra sasany namaritra fa “i Paul Rafanoharana no ati-dohan’io raharaha maloto io”. Tsy tokony mbola hisy fitenenana an’izany izao satria mbola ao anatin’ny famotorana. Ny ahiana mantsy dia sao misy tetika maloto any ho any ka hanaboribory ny raharaha hoe “i Paul Rafanoharana no ati-doha” ka hangatsiatsiaka ny “tena ati-doha”. Ahiana hivadika mihitsy ny rasa ka ny madio no ho voasaringotra fa ny tokony haloto, hadio moramora any ho any. Izahay manokana dia sahy miteny an’izany satria hatreto dia tsy mbola voatonona mihitsy ny sokajin’olona fantatra tany amin’ny manodidina ny faha-26 Jona tany fa ati-dohan’ny fikasana hamono ny filohampirenena Rajoelina. Ny iombonan’ny loharanom-baovao aloha dia “misy dian-tanan’i Frantsa ao” fa ireo eto an-toerana dia tsy mbola voatonona. Diso ve izany ny loharanom-baovao azonay tamin’izany manodidina ny 26 Jona izany ? Asa aloha fa takiana ny tsy mbola hilazana hoe “Paul Rafanoharana no ati-doha”.
Amin’ny raharahan-keloka dia voasokajy ho ady heloka bevava io raharaha iray io. Noho izany, tsy izahay no ndeha hampianatra ny fitsarana sy ny mpanao famotorana ny asany, ka aoka re ho marina mandrakariva ny fomba fiteny hoe “na amboako na amboan’olona, rehefa vandana dia kary”. Aoka koa tsy hohararaotina ny raharaha hihampangana ny madio fa manahirana.
Ny amehezana azy dia tsotra. Mila mitandrina ny filohampirenena fa misy mpamosavy malemy ao ka ny ao an-trano ihany no aringany.